2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနာရီတောင်တက်နှင့်တောင်တက် Times သတင်းစာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီ2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration
16 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနာရီတောင်တက်နှင့်တောင်တက် Times သတင်းစာ: ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက် Long ကအကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအလွန်အတူတကွခညျြနှောငျဆက်လက်ဦးချင်းစီကတခြားအစာရှောင်ရထား, ခရီးသည်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့များရိုးရှင်းစွာ။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကားများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာအမှုဆောင်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမြင့်မားတဲ့နည်းပညာ features တွေနှင့်အတူအကြီးအပျနှံနှင့်ရထားနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။
Bursa, Antalya ၏မြို့အချို့မှအလွယ်တကူ access များအတွက် TCDD အားဖြင့် high-speed ကိုမီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Karaman ဘတ်စ်ကားမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ထိုမြို့နှင့် paid သဘောတူညီမှုကနေအစာရှောင်ရထားလင့်များသွားကြဖို့အနီးဆုံးဘူတာရုံရရှိနိုင်၏။ ဤရွေ့ကားလင့်များ
Karaman - Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘတ်စ်ကားဆက်သွယ်မှု
Antalya - Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘတ်စ်ကားကော်နက်ရှင်
Bursa - Eskisehir အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘတ်စ်ကားကော်နက်ရှင်
ကျနော်တို့ပိုမြန်သူတို့သင်တို့အဘို့ကိုအောက်တွင်စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားနှင့်ဤရထား၏ features တချို့ကိုခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံသားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်သို့သွားအောင်မြင်ရန်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြုစုပါတယ်။ TCDD များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့လက်မှတ်ယခုတတ်နိုင်နှုန်းထားများမှာအပါအဝင်အွန်လိုင်းလက်မှတ်ယူပြီးရဖို့စာမျက်နှာကျော်မဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုအတူခေါ်နိုင်ပါတယ်, သင်အဆင်ပြေများနှင့်အခွင့်ထူးခံကဒီခရီးစဉ်ကိုခံစားရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်6တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားနေ့စဉ်ပျံသန်းမှုဆောင်ရွက်ပါသည်။ တူရကီသည်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်415 မိနစ်နာရီအထိ Pendik ၎င်းတို့၏မှတ်တိုင်များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်ကျန်း, အသီးသီးPolatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ကနေထွက်ခွာ။ တချို့ရပ်တန့်မရသောကြောင့်, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရထားရဲ့ဆိုက်ရောက်သောကာလ၌အချိန်အတန်ကြာလေ့ကျင့်။
Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ချိန်တည်းမှာတူရကီ-Eskisehir လိုင်းလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ တူရကီ-Eskisehir အချိန်တစ်ရက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုလုပ်ဖို့611 အချိန်တဦး။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ ကြောင့်မြို့တော်ရဲ့ဘူတာရုံမှတူရကီနှင့် Eskisehir အကြားခရီးမောင်းနှင်မှု၏ 1,5 နာရီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစားရထားသွားလာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကိုလည်း Anlara- အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှတ်တိုင်နှစ်ခု 'passes ။
Eskisehir-တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားEskişehirတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်လည်းတူရကီ, Eskişehirလိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။6အချိန် Eskisehir-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ် 11 တာဝန်ထမ်းဆောင်တဦး။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြို့တော်ရဲ့ရထားဘူတာရုံ၏, ဤအချိန်ခရီးသည်ကယ်ဖို့အတော်လေးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခရီး 1,5 နာရီပေါင်းပျမ်းမျှကြာပါတယ်။
တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာအပြန်အလှန်7စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်ပျမ်းမျှကြာချိန်နာရီ 1 55 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါဟာကျန်းPolatlıရပ်နားအလေးပေး။ သငျသညျစံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ်တွေအပါအဝင်ဤအချိန်တွင် options နှစ်ခု, ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိသည်။222+22 Pullman စ Pullman စစီးပွားရေးကိုလူတန်းစားနှင့်စီးပွားရေးလူတန်းစားတည်ရှိသည်ရှိခြင်းတဦးတည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှည်းအမျိုးအစားပါ။ အဘယ်သူမျှမထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးရေတိုသက်တမ်းရှိဤအချိန်လို့ပဲ။
Konya-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်7ရက်ပေါင်းလုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်ပျမ်းမျှကြာချိန်နာရီ 1 55 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါဟာPOLATLıနှင့်ကျန်းရပ်တန့်အပေါ်အလေးပေး။ သငျသညျစံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ်တွေအပါအဝင်ဤအချိန်တွင် options နှစ်ခု, ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိသည်။222+22 Pullman စ Pullman စစီးပွားရေးကိုလူတန်းစားနှင့်စီးပွားရေးလူတန်းစားတည်ရှိသည်ရှိခြင်းတဦးတည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှည်းအမျိုးအစားပါ။ အဘယ်သူမျှမထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးရေတိုသက်တမ်းရှိဤအချိန်လို့ပဲ။
Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားနေ့၏2အချိန်သယ်ဆောင်။ Pendik, အစ္စတန်ဘူလ်ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။420 နာရီကြာချိန်, ကမိနစ်ကြာပျမ်းမျှအချိန်။ Konya-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားမှတ်တိုင်များ, အသီးသီးEskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ဖြစ်ကြသည်။ စံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်နှင့်3အပါအဝင်နှစ်ဦးကလက်မှတ် options များ, ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးတွင် Pullman စမီးရထား, စီးပွားရေး Pullman စ, Pullman စထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်။ Konya ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရထားလမ်းဟာမိနစ်420 နာရီနှုန်းအဖြစ်အချိန်ကာလအတွင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehirအဆိုပါ pass ကိုရပ်တန့်။ စံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်နှင့်3အပါအဝင်နှစ်ဦးကလက်မှတ် options များ, ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးတွင် Pullman စမီးရထား, စီးပွားရေး Pullman စ, Pullman စထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုလှည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြား။
ပို့ဆောင်ရေး TCDD သင် (444 8 233) ၏ထင်နိုင်ပါတယ်မေးခွန်းများကိုအဘို့အခေါ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရုံအွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေအပါအဝင်အရှိဆုံးချွေစျေးနှုန်းများမှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ရတဲ့ထဲကစာမျက်နှာတစ်ခုယူပြီး, သင်အဆင်ပြေများနှင့်အခွင့်ထူးခံကဒီခရီးစဉ်ကိုခံစားရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
တူရကီ၏ TCDD မြန်နှုန်းရထားမြေပုံ:
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန်ငွေမည်မျှ? .. TCDD နေ့စဉ်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 13 / 07 / 2019 တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Show ကိုဘယ်လောက်ပိုက်ဆံ .. TCDD နေ့စဉ်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ:? အချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသို့ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားအပြန်အလှန်6နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ အသီးသီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်415 မိနစ်နာရီအထိ Pendik ၎င်းတို့၏မှတ်တိုင်များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်တူရကီ Sincan, Sincan, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ထံမှလေ့။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် ...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ Daily သတင်းစာ 2019 27 / 02 / 2019 မြန်နှုန်းရထားကိုအလွန်ခရီးသည်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအချင်းချင်းအချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာလွယ်ကူချောမွေ့အတူတကွချည်နှောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကားများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာအမှုဆောင်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမြင့်မားတဲ့နည်းပညာ features တွေနှင့်အတူအကြီးအပျနှံနှင့်ရထားနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကားကိုသှားဖို့ထက်အချိန်တိုအတွင်းရောက်လာနှငျ့သငျ Pullman စကားများ features တွေပိုမိုချွေတာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသွားလာခွင့်ပြု, စီးပွားရေးနှင့်ညစာစေ ...